आज राति चन्द्रग्रहण : हेर्नुस् के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ? - NewsCenterNepal.com
आज राति चन्द्रग्रहण : हेर्नुस् के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
२०७६, ३० असार सोमबारमा प्रकाशित
काठमाडौं । आज राति चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको राति (खण्डग्रास आधा चन्द्रमा ढाक्ने) चन्द्रग्रहण लाग्ने जनाएको छ ।
ग्रहणले राति १ः४६ बजेदेखि आग्नेय कोण (पूर्व र दक्षिणको बीच) बाट स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ३ः१५ मा ग्रहणको मध्यकाल हुनेछ । ४ः४५ मा मोक्षकाल अर्थात् ग्रहण सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्कट, तुला, कुम्भ र मीन राशि भएकाले भने ग्रहण हेर्न हुन्छ । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ । ग्रहणका समयमा दीक्षा लिन पनि उत्तम मानिन्छ । ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजीकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदयलगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिककाे पालनपोषण स्थानीय सरकारले गर्ने
च्याउ खाँदा एकको मृत्यु